Izindaba - I-SWMC 370-DTH Suburface Drilling rig isetshenziswa kakhulu ezindaweni zokwakha
I-SWMC 370 imishini yokumba ngaphansi komhlaba igcwalise ngempumelelo iphrojekthi yokuqoqa isisekelo sephrojekthi yezindlu eGuangzhou, eChina.
Iphrojekthi yezindlu eGuangzhou ihlanganisa indawo engama-62,000 m2, lapho i-44,000 m2 ingaphezulu komhlaba kanti i-18,000 m2 ingaphansi komhlaba. Kunezitezi ezingama-25 ngenhla komhlaba, kufaka phakathi izitezi ezi-4 ngaphansi kwesikhulumi nezansi ezi-4 ngaphansi komhlaba. Ukuphakama okuphelele kwesakhiwo kungu-108.8m, ukujula komgodi wesisekelo kungu-16.9m, kanti indawo yendawo ingu-21.1m Isakhiwo sobunjiniyela sakhiwe njengesakhiwo sodonga lukakhonkolo oluqinisiwe futhi isisekelo sakhiwe njengesisekelo se-raft flat.
Uma kubhekwa umphumela wokulwa nentanta waphansi ongaphansi, iqembu le-anti-floating bolt lisethwe endaweni yesikhulumi eseningizimu yale phrojekthi. Ububanzi be-bolt anti-floating ngu-130mm, isikhala siyi-780mm, futhi ukujula komgodi kungu-8m.
Ukukhethwa kwemishini yokubhola kunomthelela obalulekile enqubekweni ebushelelezi yesisekelo se-anti-floating bolt project.SWMC ikhethe umshini wokubhola we-SWMC 370 we-subsurface wenkampani yokwakha, efana namasethi amabili we-SULLAIR American 600RH air compressor, enengcindezi yokusebenza ka-1.7 Ukuhanjiswa kwe-MPA nomoya okungu-17m3. Inokusebenza kahle okuphezulu, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, isakhiwo semishini elula, ukusebenza okulula nokulawula, okungalungisa ukulawulwa kwemingcele ye-drilling ngesikhathi sangempela, futhi ukusebenza kwayo nokusebenza kahle kungahlangabezana nezidingo zephrojekthi.
Umshini wokubhola we-SWMC 370 we-subsurface umshini wokubhola we-subsurface osebenza kahle, ohlinzeka ngokusebenza kahle okuphezulu, ukuthembeka okuphezulu kanye nemishini yokumba enemisebenzi eminingi yesisekelo se-grouting engineering.Kule phrojekthi, ukusetshenziswa komshini wokubhola we-SWMC 370, kwenza ngcono kakhulu ukusebenza kahle kokwakhiwa.
Ngenxa yedwala ngokuyisisekelo ivolumu lephukile, kunokugaya okuphukile, kuhambisana nejubane eliphezulu lokukhishwa kwe-slag, imbobo engezansi ehlanzekile, ayikho into ephindaphindwayo yokuchoboza, ngakho-ke umshini we-SWMC 370 wokubhoboza umfutholuketshezi, unekhono eliphakeme lokubhola namandla okusebenzisa amandla kune rotary ejwayelekile ukubhola.
I-SWMC 370 imishini yokubhola ingagcwalisa izimbobo zokubhola zekhwalithi, ngenxa yomthelela wokubhoboza umfutholuketshezi we-hole bottom, isikhathi se-rock percussive rock sifushane kakhulu, i-hard rock lithology ishintsha umthelela kumphumela wokuchoboza awumkhulu, akulula ukwenza i-torque ye-deflection ku-bit , Ngakho-ke ukwakha imithetho yemigodi, ikhwalithi enhle, ehlanzekile, futhi ingavimbela ngempumelelo idwala elinzima nokwakheka okuyinkimbinkimbi kokuthambekela komgodi wenkinga.Ngenxa yesivinini sokujikeleza esiphansi sethuluzi lokubhola, ithuba lokushayisana phakathi kwethuluzi lokubhola nodonga lomgodi kuncishisiwe, ngakho-ke akulula ukuthi udonga lwemigodi ludilike nezinye izingozi.
Umshini wokubhola we-SWMC 370 we-subsurface wanconywa iqembu lokwakha kule phrojekthi ngenxa yezinzuzo zayo njengokuxhuma okulula, ukwakhiwa okulula, ukucindezeleka okucacile nesikhathi esifushane sokwakha. Njengamanje Isetshenziswa kabanzi ekwakhiweni kwamaphrojekthi wokwakha.